रुसी र चिनियाँ युद्धपोतहरुको संयुक्त अभ्यास | Pahara Nepal
रुसी र चिनियाँ युद्धपोतहरुको संयुक्त अभ्यास
24th October 2021 , 1:49 PM
Ukrainian helicopters fly overaRussian warship during Sea Breeze 2021 maneuvers, in the Black Sea, Friday, July 9, 2021. Ukraine and NATO have conducted Black Sea drills involving dozens of warships inatwo-week show of their strong defense ties and capability followingaconfrontation between Russia's military forces andaBritish destroyer off Crimea last month. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
एजेन्सी । रुसी र चिनियाँ युद्धपोतहरुले संयुक्त रुपमा आफ्नो अभ्यास गरेको छ । दुई देशबीचको युद्धपोतहरुले प्रशान्त महासागरको पश्चिमी क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले शनिवार जानकारी गराएको हो ।
उनहरुले १७–२३ अक्टोबरसम्म अभ्यास गरेका थिए । रुसी रक्षा मन्त्रालयले जारीको स्टेटमेन्टलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यम तासले लेखेको छ,‘रुस र चीनले संयुक्त रुपमा प्रशान्त महासागरमा अभ्यास गरेको छ । एसिया र प्रशान्त महासागरमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न त्यस क्षेत्रमा अभ्यास गरिएको हो ।
अभ्यासको क्रममा वारसिपहरु पहिलो पटक सुगार स्ट्रेट क्षेत्रमा समेत पुगेका थिए ।’ रुस र चीनले आफ्नो अत्याधुनिक युद्धपोतलाई लिएर अभ्यास गरेको जनाइएको छ । उनीहरुले संयुक्त रुपमा १७ नौटिकल माइलसम्म अभ्यास गरेको जनाइएको छ । उनहरुले संयुक्त रुपमा सन् २०२१ मा जापानको समुद्रमा अभ्यास गरेका थिए ।-Photo